Gbasara Anyị - ntanetị mgbidi
Mgbaghantupu na-elekwasị anya na ntanetị ihe eji agbanwe na ntanetị na-agbanwe agbanwe, nke nwere afọ 20 n'ọhịa a. Mgbakwunye igwe akwara eriri eriri, igwe eriri igwe, ụdị nke ejiri aka mee nke a na-eji ya n'uzo zoo, nnụnụ nnụnụ, steepụ, usoro eriri akwụkwọ ndụa na inox rope na ọdịdị ala, ihe eji achọ mma na nka. ntinye balcony, nchekwa na usoro nchekwa ọdịda.
Mpempe na-agbanwe agbanwe maka ihe eji achọ mma, anyị nwere akwa ntanetị nke ọla, gbatụrụ agbatị metal, siliki njikọ nko eji eme ihe, ihu ihe eji achọ mma na ihu igwe, wdg.
A zụrụ ndị na - arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ anyị nke ọma ma nwee aka ọrụ n'ọhịa nke igwe eji igwe anaghị agba nchara. Anyị nwere usoro QC siri ike ma lelee nke ọma tupu oge ntanetị, na mgbe ọ gachara. N'ime afọ ndị gara aga, anyị na-enwetakarị ahụmịhe bara uru na mmepụta na ire ahịa, na enwere nnukwu mmebi imewe, ire na mgbe a na-ere ahịa. Egosiputara ngwaahịa anyi n’ahịa Australia, USA, France, Spain, Mexico, Denmark, Sweden, Japan, South Korea, India, Singapore, Kuwait. N'ikwekọ n'ebumnuche nke ibi ndụ kredit, zụlitere na mma, Gepair Mesh na-anabata nkwado nke ụwa site na ndabere nke ntụkwasị obi na mmepe mmekọrịta!
Nzube •Bebụ onye isi na ụlọ ọrụ tensile site na ịnye ngwaahịa ntanetị dị elu, ọrụ tozuru oke, mmekọrịta na uru. Soro ndị ahịa anyị na-akwanyere ùgwù nọ n'ụwa niile too.
Ọhụụ •Providenye oru di nma karie atụmanya nke ndi ahia anyi.
Ozi •Iwulite mmekọrịta ogologo oge n'etiti anyị na ndị ahịa na ndị ahịa ma nye ọrụ ndị ahịa pụrụ iche site na ịchụ ahịa site na imepụta ihe na teknụzụ dị elu.
Isi ụkpụrụ • Anyị kwenyere n'ịkwanyere ndị ahịa anyị nkwanye ùgwù na okwukwe; Anyị na-eto site na okike, ihe okike na ihe ọhụrụ; Anyị na-ejikọta ịkwụwa aka ọtọ, iguzosi ike n'ezi ihe na ụkpụrụ azụmahịa na akụkụ niile nke ọrụ azụmaahịa anyị.